လူအိုတွေ နိုင်ငံရေး မလုပ်သင့်ကြောင်း ပြောတဲ့ ဦးခင်ညွန့်နဲ့ … | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ဧရာဝတီ| May 15, 2013
ထောက်လှမ်းရေး ခေါင်းဆောင်ဟောင်း ဦးခင်ညွန့်ကို ၎င်း၏ နဝဒေး ပန်းချီပြခန်းတွင် တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ – နန်းသီရိလွင် / ဧရာဝတီ)
This entry was posted on May 16, 2013, in အင်တာဗျူး, ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ထိုင်းနိုင်ငံကို လူပွဲစားနဲ့ တရားမ၀င်ရောက်လာတဲ့ မြန်မာ ၈၀ ကျော်ကို နေရပ်ပြန်ပို့
Rescue operation after Myanmar boats sink →